အရေပြားထိန်းသိမ်းရေးနည်းနာများ - CantWait2Say
ခုခေတ်မှာ လူတိုင်းဟာ skin ကို အချိန်ပေးပြီး Care လာကြပါပြီ။Skin Care လုပ်မလုပ်စာလည်း အသက် အပိုင်းအခြားတစ်ခုရောက်ရင် သိသာလာတာမို့ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်ပြီး ထိရောက်တဲ့ Skin Care နည်းနာတွေကိုတော့ တကယ်ကို သိထားသင့်ပါတယ်။မျက်နှာသစ်ပြီး တစ်ခုခုလိမ်းဆိုတဲ့ နှစ်ဆင့်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ နည်းကိုပဲ သိထားရာကနေ စုစုပေါင်း ၁၀ ဆင့်လောက်ထိ ရှိတဲ့ အဆင့်များတဲ့ skin Care tips တွေ ထိကြားဖူးလာတော့ ဘာတွေလုပ်ရမှန်းမသိ အရမ်းတွေ လမ်းပျောက်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒေါက်တာဇီဝကကနေ မရှုပ်ထွေးဘဲ ထိရောက်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာပါ။
၁ – အရင်ဆုံး ကိုယ့်အသားအရေအမျိုးအစားကို သိအောင်လုပ်ပါ။ အဆီပြန်သူလား? ခြောက်သွေ့သူလား? ဆန်းဆန်းတင့်လား? ဝက်ခြံပေါက်လွယ်သူလား?ဒါလေးကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဦး။
၂- ဘယ်အဆင့်တွေကို အရင်သုံးရမလဲလေ့လာပါ။ ဘာပြီး ဘာလိမ်းရမလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စက လိမ်းတဲ့ Skin Care တွေ ထိရောက်မှုကွာစေပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းတော့ ပေါ့တဲ့ အမျိုးအစားတွေကို အရင်လိမ်းပြီး Moisturizer လ်ု ပျစ်နှစ်တာတွေကို နောက်ဆုံးမှ လိမ်းပေးရပါမယ်။ ပျစ်နှစ်တာတွေလိမ်းပြီးရင်လည်း ၅မိနစ်လောက်ထိ အရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်ဖို့စောင့်သင့်ပါတယ်။
၃- သေချာ သန့်စင်ပါ။ Double Cleansing လို့ ခေါ်တဲ့ အပြင်ကပြန်လာရင် Makeup Remover နဲ့ သေချာစင်အောင်ဖျက်ပြီးမှ သုံးနေကြ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာနဲ့ ပြောင်စင်အောင်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။ ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားခြင်း Exfoliation ကိုလည်း တပတ် ၂ကြိမ် ၃ကြိမ် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၄- ရက်လွန်ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးပါနဲ့။ 🗓Skin Care တစ်ခုကို စသုံးတော့မယ်ဆိုရင် စဖွင့်တဲ့ရက်ကို ရက်စွဲလေးကပ်ပြီး မှတ်ထားပေးပါ။ စဖွင့်တဲ့ရက်ကစ ၁၂လ အထိသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
၅- Sunscreen is king ပါ။ အသားအရေ ပျက်စီးစေတဲ့ အဓိက တရားခံဟာနေရောင်ခြည် ဖြစ်တာမို့ ဘယ်လောက် Skin Care လုပ်လုပ် sunscreen မလိမ်းရင် သိပ်ထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၆- Skin Care ဟာ ရာသီပေါ်လိုက်ပြီး ပြောင်းသုံးရနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်သုံးနေကြ skin Care အာနိသင်သိပ်မပြတော့တာ အဆင်မပြေတော့တာဟာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီမှာ အသားခြောက်ပေမယ့် နွေရာသီမှာတော့ အဆီပြန်စေနိုင်တယ်မဟုတ်လား?
၇- အစားအသောက်ကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။အတွင်းသားကအစ ကျန်းမာမှ အသားအရေလှတာမို့ ဘာစားစား အရေပြားအတွက်လည်း ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ အငန်နဲ့ အချိုများတာတွေလျှော့စားပြီး ထောပတ်သီး၊ ငါး ၊ ဟင်းနုနွယ် စတဲ့ အသားလှစေတာတွေကိုလည်း စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၈ – ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အဆီပြန်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ Moisturizer သုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှ အရေပြားက စိုစိုအိအိလေးဖြစ်နေမှာပါ။ပြောပြထားတဲ့ အရေပြားထိန်းသိမ်းနည်းနာတွေဟာ သိပ်မခက်ခဲဘဲ ထိရောက်နိုင်တာလေးတွေမို့ လိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါစို့လား။
ဤဆောင်းပါးကို ဒေါက်တာ ဇီဝက မှ ကူညီပံ့ပိုးပါသည်။
ခုခတျေမှာ လူတိုငျးဟာ skin ကို အခြိနျပေးပွီး Care လာကွပါပွီ။Skin Care လုပျမလုပျစာလညျး အသကျ အပိုငျးအခွားတဈခုရောကျရငျ သိသာလာတာမို့ ကိုယျနဲ့ သငျ့တျောပွီး ထိရောကျတဲ့ Skin Care နညျးနာတှကေိုတော့ တကယျကို သိထားသငျ့ပါတယျ။မကျြနှာသဈပွီး တဈခုခုလိမျးဆိုတဲ့ နှဈဆငျ့လောကျပဲ ရှိတဲ့ နညျးကိုပဲ သိထားရာကနေ စုစုပေါငျး ၁၀ ဆငျ့လောကျထိ ရှိတဲ့ အဆငျ့မြားတဲ့ skin Care tips တှေ ထိကွားဖူးလာတော့ ဘာတှလေုပျရမှနျးမသိ အရမျးတှေ လမျးပြောကျတာမြိုး ဖွဈဖူးကွမှာပါ။
ဒီတဈခေါကျတော့ ဒေါကျတာဇီဝကကနေ မရှုပျထှေးဘဲ ထိရောကျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေိုပွောပွပေးမှာပါ။
၁ – အရငျဆုံး ကိုယျ့အသားအရအေမြိုးအစားကို သိအောငျလုပျပါ။ အဆီပွနျသူလား? ခွောကျသှသေူ့လား? ဆနျးဆနျးတငျ့လား? ဝကျခွံပေါကျလှယျသူလား?ဒါလေးကို ကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျလိုကျပါဦး။
၂- ဘယျအဆငျ့တှကေို အရငျသုံးရမလဲလလေ့ာပါ။ ဘာပွီး ဘာလိမျးရမလဲ ဆိုတဲ့ကိစ်စက လိမျးတဲ့ Skin Care တှေ ထိရောကျမှုကှာစပေါတယျ။ အကွမျးဖငျြးတော့ ပေါ့တဲ့ အမြိုးအစားတှကေို အရငျလိမျးပွီး Moisturizer လျု ပဈြနှဈတာတှကေို နောကျဆုံးမှ လိမျးပေးရပါမယျ။ ပဈြနှဈတာတှလေိမျးပွီးရငျလညျး ၅မိနဈလောကျထိ အရပွေားထဲ စိမျ့ဝငျဖို့စောငျ့သငျ့ပါတယျ။
၃- သခြော သနျ့စငျပါ။ Double Cleansing လို့ ချေါတဲ့ အပွငျကပွနျလာရငျ Makeup Remover နဲ့ သခြောစငျအောငျဖကျြပွီးမှ သုံးနကွေ မကျြနှာသဈဆပျပွာနဲ့ ပွောငျစငျအောငျဆေးပေးသငျ့ပါတယျ။ ဆဲလျသေ ဖယျရှားခွငျး Exfoliation ကိုလညျး တပတျ ၂ကွိမျ ၃ကွိမျ လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
၄- ရကျလှနျပစ်စညျးတှကေိုမသုံးပါနဲ့။ 🗓Skin Care တဈခုကို စသုံးတော့မယျဆိုရငျ စဖှငျ့တဲ့ရကျကို ရကျစှဲလေးကပျပွီး မှတျထားပေးပါ။ စဖှငျ့တဲ့ရကျကစ ၁၂လ အထိသာ သုံးစှဲသငျ့ပါတယျ။
၅- Sunscreen is king ပါ။ အသားအရေ ပကျြစီးစတေဲ့ အဓိက တရားခံဟာနရေောငျခွညျ ဖွဈတာမို့ ဘယျလောကျ Skin Care လုပျလုပျ sunscreen မလိမျးရငျ သိပျထူးလာမှာမဟုတျပါဘူး။
၆- Skin Care ဟာ ရာသီပျေါလိုကျပွီး ပွောငျးသုံးရနိုငျပါတယျ။ ကိုယျသုံးနကွေ skin Care အာနိသငျသိပျမပွတော့တာ အဆငျမပွတေော့တာဟာ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲလို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဆောငျးရာသီမှာ အသားခွောကျပမေယျ့ နှရောသီမှာတော့ အဆီပွနျစနေိုငျတယျမဟုတျလား?
၇- အစားအသောကျကလဲ အရေးကွီးပါတယျ။အတှငျးသားကအစ ကနျြးမာမှ အသားအရလှေတာမို့ ဘာစားစား အရပွေားအတှကျလညျး ဂရုပွုသငျ့ပါတယျ။ အငနျနဲ့ အခြိုမြားတာတှလြှေော့စားပွီး ထောပတျသီး၊ ငါး ၊ ဟငျးနုနှယျ စတဲ့ အသားလှစတောတှကေိုလညျး စားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
၈ – ရဓောတျဖွညျ့ဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ဘယျလိုပဲ အဆီပွနျတဲ့သူဖွဈပါစေ Moisturizer သုံးပေးဖို့လိုပါတယျ။ဒါမှ အရပွေားက စိုစိုအိအိလေးဖွဈနမှောပါ။ပွောပွထားတဲ့ အရပွေားထိနျးသိမျးနညျးနာတှဟော သိပျမခကျခဲဘဲ ထိရောကျနိုငျတာလေးတှမေို့ လိုကျလုပျကွညျ့ကွပါစို့လား။
ဤဆောငျးပါးကို ဒေါကျတာ ဇီဝက မှ ကူညီပံ့ပိုးပါသညျ။